Dadku waxay inta badan ka fekeraan su'aalahan marka ay soo iibsanayaan kursi cusub oo gurigaaga ah, keebaa soo jiidasho leh, waxa maaddadu sii dheeraato, fadhiga safafka ee maqaar ama dhar kee fiican?? Dhab ahaantii, waxaa jira arrimo badan oo la tixgelinayo in miisaaniyaddu tahay iyo in kale, raaxada, qaab, iwm wixii intaa ka dambeeya waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan noloshaada. Marka la eego maqaar vs fadhiga dharka, waxaa lagu go'aamin doonaa sida aad u nooshahay iyo waxa aad ku nooshahay. Sidaa awgeed, waxaan qornaa qodobbada hoose si aan u tixraacno si aan ugu iibsanno fadhiga ku habboon gurigaaga.
Waxa la tixgelinayo marka la iibsanayo fadhiga maqaar iyo dharka
Markay timaaddo raaxaysigu waa mid u gaar ah oo ku salaysan dareen shaqsiyeed. Sidaa darteed waxa kaliya ee aad samaysaa waa inaad isweydiiso, taas oo ah mid ka fiican jidhkaaga?
Dareenka guud ayaa ah in marada ay ka raaxo badan tahay maqaar cuz waa ka jilicsan tahay, dabacsanaan badan, iyo heerkulka oo ka yara jawaaba xaaladaha qolka. Laakiin waxay kuxirantahay marada dharka iyo nidaamka taageerada sidoo kale. Guud, sofasyada dharku waa ka neef badan yihiin kuraasta maqaarka. Xitaa haddii aad muddo dheer fadhido, badhidaadu aad bay u kululaataa, qoyan oo cufan, taas oo dadka dareensiisa raaxo iyo yaraynta xanaaqa. Si kastaba ha noqotee, hal shay waa in la daryeelaa, in qaar ka mid ah dharka jaban ay noqdaan kuwo dabacsan oo abuuri doona kuuskuusyo.
Sida for fadhiga maqaar, waxaa inta badan saameeya cimilada. Xilliga jiilaalka, fadhiga maqaarku wuxuu noqon karaa mid aad u qabow in la taabto ama goob, laakiin intaad buste dusha ka qaadanayso waxay kululaan doontaa meel u dhow heerkulka jidhka aadanaha. Xagaaga, xitaa haddii aadan haysan qaboojiye rakibidda, fadhiga maqaarku wuu ka qabow badan yahay dhar kaas oo kuu keenaya inaad dhidid oo ku dhegto maqaarka. Xaqiiqdii, waxaan ku talinaynaa in lagu rakibo xaalad xakamaynaysa cimilada, kaas oo keenaya raaxo aad u badan cimilada kulul.
Doodda qiimaha maqaarku vs. sofas dhar ah, haddii labaduba isku qaab yihiin, lagu sameeyay qaab isku tayo leh, maqaarku guud ahaan wuu ka qaalisan yahay.
Waxaan ka baadhay fadhiga maqaar iyo safaf dhar labadaba Wayfair, natiijooyinkii hore waxay muujinayaan kala duwanaanshahooda. Haraggu aad buu uga sarreeyaa dharka. Laakiin, waxa kale oo jira qaar ka mid ah marooyin raaxo leh oo ay sameeyeen naqshadeeyeyaal caan ah oo dhaafsiisan qiimaha sariirta maqaarkan. Waxa kale oo jira sofas maqaar oo heerkoodu hooseeyo oo ka jaban dharka haddii aadan tixgelin raaxada iyo muuqaalka. Qiimuhu inta badan wuxuu ka tarjumaa tayada iyo cimriga fadhiga, sidaa darteed shaki kuma jiro in maqaarku sii dheeraado dharka haddii uusan ku dhaawacmin boorsada.
Sidaa darteed, marka hore waa inaad tixgelisaa waa miisaaniyadda, ka dibna qurxinta guriga, dhismaha qoyska. Waxaa ka dhaqaale badan in la doorto fadhiga dharka oo laga yaabo inuu badbaadiyo kharashaadka badhkood. Kuraasta maqaarku waxay aad ugu habboon yihiin shakhsiyaadka leh xaalado maaliyadeed oo wanaagsan ama qolal soo dhaweyn si ay u iibsadaan. Halka sofasyada dharka ay aad ugu habboon yihiin qoysaska tirada badan haddii ay yihiin qaabab badan ama qiimayaal dabacsan.
Sariirta dharka iyo maqaarku labaduba waxay leeyihiin qaab ballaadhan oo ah qaabab iyo midabyo ay doortaan, kaas oo ay tahay in la waafajiyo qolka oo dhan.
Guud, Sariiraha dharka ayaa bixiya xulashooyin ka badan maqaar sababtuna tahay qaababkooda dawakhaad leh, midabada, qaababka, iyo farsamooyinka dahaarka. Haddii kaliya ka fiirso inaad dhigto kursi maro ah markaa markaad qurxinayso gurigaaga wax daryeel ah ma laha, cuz waxaad ogaan kartaa qaab kasta iyo midab kasta oo aad kula kulanto qolka. Waxay noqotay dooqa koowaad ee dadka intiisa badan, oo ay matalaan sofas -yada mareykanka ee caadiga ah oo ka faa'iideysanaya qaab -dhismeedkooda dhagan, qalab casri ah, naqshad cilmiyeed, hal -abuur xarrago leh iyo raaxo waasac ah.
Taas lidkeeda, qurxinta guriga oo yar ayaa awood u leh inay la jaan qaadaan kursi fadhida maqaar aad u sarreeya. Haddii aan ku habboonayn qolka, saamayn casri ah ayaa loo diri karaa. Dhab ahaantii haddii si fiican loo waafajiyo waxay soo bandhigi kartaa xarrago u gaar ah qol ay adag tahay in lagu soo koobo maro. Midka ugu badan ee Maqaarka waa qaabka chesterfield oo ah mid aad u dhaqameed. Si kastaba ha noqotee, xeer ahaan, Sofas -ka maqaarku caadi ahaan way ka casrisan yihiin kuwa dhiggooda ah. Haddii aad doorbideyso inaad yeelato muuqaal casri ah ama casri ah, waxay u egtahay inay u muuqato mid ka jilicsan oo ka sarraysa inta badan sofasyada dharka.
Hadday tahay kursi maqaar ama dhar ah dhammaantood waxay gurigaaga siiyaan xarrago iyo xarrago, qolkaaga jiifka, qolkaaga cuntada, ama qolkaaga nasashada. Sidaa awgeed, waxay eegaysaa doorashada qof ahaaneed. Ma rabtaa in fadhigaagu noqdo qaybta ugu muhiimsan ee naqshadda qolkaaga fadhiga? Waa kuwee qaabka qurxinta ee aad doorbidayso, guridda ama casriga ah? Ma rajaynaysaa inaad gurigaaga u fududaato? Taasi waa waxa kaliya ee aan tixgelin doonno markaan dooraneyno fadhiga fadhiga.
Ka sokow raaxada, kharashka iyo qaabka, dayactirku wuxuu noqon karaa qodob muhiim u ah in laga waantoobo. Maqaarku aad buu u fududahay in la nadiifiyo oo waqti yar bay ku kacdaa, halka marada ay u baahan tahay in la faaruqiyo oo si joogto ah loo nadiifiyo. Sariirta maqaarku waxay socon kartaa tobannaan sano haddii si habboon loo daryeelo. Si kastaba ha noqotee, halka ay tahay in shuruud lagu xidho si joogto ah si looga hortago dildilaacyo iyo kala dillaac.
Sababtoo ah muujinta biyuhu, waxa aad sameyneyso ayaa ah inaad si buuxda ugu qoyso tuwaalka biyo nadiif ah, iska xoq oo tirtir dusha sare ee fadhiga. Si kastaba ha noqotee, haddii dayactirka muddada-dheer ay u baahan tahay saliid gaar ah iyo wax-soo-saarid. Intaa waxaa dheer, mar haddii fadhiga maqaarku uu jidh ahaan dhaawacmo, daboolka kore lama beddeli karo, taas oo ay adag tahay in la maareeyo. Ka sokow, xayawaanka qaarkood sida bisadda ayaa u bartay inay ku calaliyaan fadhiga. Haddii ay dhacdo waxyeello, xirxir sariirta fadhiga ama soo iibso alaabta carruurtu ku ciyaarto si bisaddu u mashquuliso. Waa in la ogaadaa in kuraasta maqaarku ay aad u adag tahay in la dayactiro oo xoqistu ay adag tahay in la dayactiro, markaa haddii aad carruur ama xayawaan guriga ku haysato, sofasyada marada ayaa ku habboon.
Sida dharka, waa mid ku habboon oo fudud in la joogteeyo. Inta badan gogosha fadhiga ee dharka waa laga saari karaa oo la dhaqi karaa. Haddii aad u malaynayso inay dhib badan tahay inaad la tacaasho alaabtan wasakhaysan, waad iska bixin kartaa oo waxaad u diri kartaa nadiifiyaha qalalan. Haddii aad ka welwelsan tahay kuleylka uun dhig sariirta marka xagaagu yimaado oo ku beddel suuf diiran jiilaalka. Si kastaba ha noqotee, sariiraha dharku waxay u soconayaan kiniin waxayna xirtaan khafiifnimo iyadoo la isticmaalo marar badan, sidaa darteed dooro kursi tayo sare leh ayaa yarayn kara halista.
Sariirta dharka guud ahaan waxay ka samaysan tahay xariir, satin, hemp, corduroy iyo walxo kale oo adkaysi u leh. Per wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah. Sofasyada xariirta iyo satinku waxay gudbiyaan xarrago iyo raaxo, siinaya dadka dareen aad u weyn. Si kastaba ha noqotee, sofasyada hemp iyo corduroy waxay u muuqdaan kuwo culus oo caadi ah, waxayna u muuqataa inay samayso qaab dabiici ah oo fudud.
Xulashada alaabta fadhiga ee maqaarku waa weyn yahay, sidoo kale. Maqaarka kala duwan wuxuu abuuraa saamayn gebi ahaanba ka duwan. Astaamaha sofas -ka maqaarku waxay diiradda saarayaan, dabacsanaanta dabiiciga ah, adkaanta lo'da, dusha jilicsan, xawaaraha midabka sare, dabacsanaanta wanaagsan, marin hawo, iyo xoog farsamo sare. Waxa ugu fiican ayaa ah xooggeeda jeexjeexa oo sarreeya iyo xoogga gilgilashada kaas oo hagaajiya cimriga fadhiga maqaarku. Badanaa waxay u kala baxaan laba nooc, maqaar dhuuban ama dhumuc weyn leh. Naqshadeynta fadhiga maqaar khafiif ah waxay u taagan tahay qaab fudud oo dhalaalaya.
Sofas maqaar oo tayo sare leh ayaa jilicsan in la taabto, raaxo leh in la fadhiisto, diiran jiilaalka iyo qabow xagaaga. Sababtoo ah qaab -dhismeedka wanaagsan, qiimaha ayaa ka qaalisan dharka. Waxaa jira noocyo badan oo ah sofas dhar oo dhammaantood dadka siiya dareeno kala duwan. Sofas ka samaysan dharka xariirta had iyo jeer waxay dadka u gudbisaa dareen sharaf leh, iyo sofas ka samaysan hemp waa ka sahlan yihiin. Marka laga eego dhinaca maaddada, kuraasta maqaarku waa kuwo sii raagaya.
Waxaa jira xaqiiqo ah inaan inta badan iska indho -tirnay in fadhiga maqaarku dhab ahaantii yahay hypoallergenic. Haddii qof leeyahay xasaasiyad deegaan, markaa tani waxay noqon kartaa mid aan waxtar lahayn haddii ay fiican tahay fadhiga. Si ka duwan fadhiga dharka, sofas -ka maqaarku waxay dabin caarada yar ee boorka, xayawaanka xayawaanka, iyo xasaasiyadaha kale, taasoo keeni karta xasaasiyad. Marka, isbarbar dhig kursi fadhiga oo la siiyay sariir diiran oo xasaasiyad xasaasi u ah si loo nadiifiyo fadhiga maqaarku wuxuu u muuqdaa inuu yahay doorasho ka fiican. Xaqiiqdii, suurtogal ma aha in fadhiga dharka laga ilaaliyo xasaasiyadaha, laakiin waxay ku kici doontaa waqti dheeri ah waxayna qaadan doontaa dadaal ka badan sariir maqaar oo aad u dheer
Waa kuwan su'aalo waxtar leh oo aad isweydiiso marka aad iibsaneyso maro ama fadhiga maqaar:
Ma haysataa wax xayawaan ah? Xayawaankaagu ma yihiin dhallaankaaga? Waxaan guud ahaan kugula talineynaa dharka dadka leh xayawaanka maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay ku xoqaan haragga qaaliga ah iyagoo gurguuranaya. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay tababare caqli ku leh xayawaanka, markaa labaduba waa fiican yihiin.
Carruur ma leedahay? Miyay u nugul yihiin shilalka nooc kasta? Miyay inta badan ku ciyaaraan fadhiga? Hadday haa tahay oo dhan, i aamin, maqaarku wuxuu kuu adeegi karaa waqti dheer marka la barbardhigo dharka. In kasta oo ay u dhowdahay inaysan jirin si looga fogaado dulmiga carruurta socod baradka ah, qorshe xakamaynta waxyeellada ayaa lagama maarmaan ah.
Sariirtaadu waxay noqon doontaa wehel dheer oo u baahan inay ka tarjunto qaabkaaga isbeddelka iyo maaraynta baahiyahaaga nasashada. In kastoo dooranaya dhar vs. kursi maqaar ah (ama si kale) waxay u ekaan kartaa doorasho bilicsanaanta, waxay saamayn doontaa cimri dhererka gabal ee gurigaaga. Wax wanaagsan waxaan gacanta ku haynaa xulasho aad u badan.
Sida loo hubiyo marka la iibsanayo fadhiga maqaar iyo maro
1. Fiiri dahaarka bannaanka oo ay tahay in uu aad u adag yahay. Hubi inaysan jirin laalaab iyo laalaabyo aan la rabin oo saamayn ku leh muuqaalka.
2. Dusha sare ee fadhiga ee fadhiga waa inuu ahaadaa mid siman, oo aan qabatooyin lahayn, ciddiyaha soo baxay, ama daruuriga, taas oo dhaawici doonta dadka iyo dharka jeexjeexan.
3. Haddii aad taabato biraha ama alwaax, weli waxaad dareemeysaa xagasha jirta taas oo macnaheedu yahay daboolka dahaarka waa sahlan tahay in la gashado waqti gaaban, gaar ahaan meel u dhow fadhiga.
4. U fiirso in qaababka si habboon loo waafajiyay, iyo tolliintii loo adeegsan jiray qurxinta ayaa si siman u kala fog.
5. Barkinta waa inaan lagu hakin cirifka hore ee kursiga. Xidhiidhku waa inuu ahaadaa mid cidhiidhi ah intii suurtogal ah inta u dhaxaysa barkinta, garbaha, dhabarka dambe, iyo fadhiga.
6. Hubi in armrests -ka iyo lugaha fadhiga ay xasilloon yihiin, dusha alwaaxdu waa siman yahay. Barkinta waa in ay haysataa taageero ku filan oo la jaanqaada kursiga fadhiga.
7. Sariirta maqaarku inta badan waxay leedahay cillado chromatic ah oo aan muuqan, xataa wasakhda yaryar, sidaa darteed u fiirso midabada haragga ee meel kasta ku wareegsan.
Dharka Dharka iyo Noocyada Hargaha
Macaamiisha badankoodu ma baran karaan noocyada marada iyo maqaar -ka -samaynta kuwaas oo waliba gacan ka geysanaya soo -qaadista marada ama haragga. Noocyada marada dahaarka ah waa mid dabiici ah oo dabiici ah ama fiilooyin ay dadku sameeyeen. Halkan waxaa ah hordhac kooban oo ku saabsan fiilooyinka dharka ah ee aad heli doonto marka aad wajahayso xulashooyinka dharka ee kala duwan.
Fiber dabiici ah
Fiber -ka dabiiciga ah waa walxo fiilo oo joogto ah oo ka soo jeeda dhirta ama xayawaanka. Waxay u muuqdaan kuwo jilicsan, qurux badan in la qurxiyo oo lagu farxo, raaxo leh in la taabto. Waxaa jira afar xabo oo dabiici ah sida astaamaha hoose.
Hayso kuleylka iyo diirimaadka; Raagaya, miisaan ka badan dharka kale; Laalaabkii iyo wasakhdii u adkaysta; Si fudud u xidho midabka, libdhi u adkaysta; Bakteeriyada, urta diida
Dusha ayaa siman, jilicsan laakiin aan siibasho lahayn; Daryeelka maqaarka iyo timaha sababtuna tahay albumen -ka gacanta ee dabiiciga ah; Midabada iyo daabacaadaha si fiican; Dhidid ayaa daciifiyay, qorrax, saabuun; Ciidda diida, caariyaysi, iyo aboor; Wuxuu u baahan yahay daryeel gaar ah, nadiifinta qalalan
Raaxo leh oo neefsan kara; Fiber dabiici ah oo aan lahayn kiimiko.; Hypoallergenic oo aan cuncun maqaarka.; Dib loo cusboonaysiin karo oo nooleyaal noqon kara.; Dhaqidda mashiinka.; Aad ugu nugul yaraynta iyo duudduubka badan.; Xadhkaha dabiiciga ahi si dhakhso ah ayay u dillaacaan
Fiber dabiici ah oo leh wasakhowga deegaanka oo hooseeya; Hawl-culus u leh wax-soo-saarka; Dabcan, iska caabinta cayayaanka; Si fiican u nuuga qoyaanka - ilaa 20% miisaankeeda; Qabow iyo ubax gaar ah ee cimilada kulul iyo qoyan; Hypoallergenic, ku habboon maqaarka xasaasiga ah ama xasaasiyadda; Waxaa saameeyay caariyaysi iyo dhidid; Way adag tahay in meesha laga gooyo
Dadku waxay sameeyeen fiilo
Fiber-ku-samaynta macmalka ah waxaa sameeya aadanaha iyada oo loo marayo isku-darka kiimikada, sida lid ku ah fiilooyinka dabiiciga ah ee sida tooska ah uga soo jeeda noolaha. Waxaa ka mid ah naylon, caagad, akril, vinyl polyolefin, iwm. Halkaan waxaa ah astaamaha noocyadan fiilooyinka ee dadku sameeyay.
Wuxuu ka hortagaa fidinta iyo yaraynta; La dhaqi karo ama la qalajin karo; Daryeel sahlan maadaama ay ka hortagto laalaabashada, baaba'aya.; U adkaysta kiimikooyinka badankood; Ma noqon doono caariyaysi ama biyo ma nuugo; Dhibaatooyinka ma guurtada ah iyo kuwa kiniiniga; Wasaqda saliidda way adag tahay in laga saaro; Aan deegaanka u wanaagsanayn
Waxaa laga soo saaray dhalaalo balaastig ah, aad u ololi kara; Awood xoog badan; Raagaya, adkaysi u leh midabaynta; Jumlado fiican iyo dabool; Wuxuu hayaa midabkiisa ; Guryaha isku xirnaanta oo liita, adag tahay rinjiyeynta; Alaabtu waxay muujin kartaa inay sii xumaanayso
Fudud, jilicsan, oo diirran, gacanta dhogorta u eg; Waxay ku dayan kartaa fiiloyin kale, sida suufka; Midabada midabada dhalaalaya; Aan xasaasiyad lahayn; Baalashyada iska caabiya, saliid, kiimikooyinka, iftiinka qorraxda; Wuxuu qoyaanka ka saaraa jirka waana la dhaqi karaa; Ku dhibtoonaya kiniiniyada iyo dhibaatooyinka abrasion
Xoog leh haddana miisaankiisu ka yar yahay fiber kasta oo kale oo caadi ahaan la isticmaalo; Inta badan qalabka fidsan ; Qoyaan aad u nuuga, neefsan kara.; Aad u adkaysi u leh abrasion, caaryada, caariyaysi iyo laalaab; Si fudud ayaa loo dhaqaa, waxayna adkaysi u leeyihiin saliida daata.; Waxaa saameeyay iftiinka qorraxda iyo, jaale leh da '; U adkaysiga saliidda iyo kiimikooyinka badankood; dhibic gubasho iyo dhalaalid
Cellulose dib loo soo nooleeyay
Midabada si fudud oo soo saarta midabyo muuqda
Loo soo bandhigay inay u ekaato xariir, dhogor, ama suuf
Siman, waarta oo aan qaali ahayn
Dhibaatooyin ma guurto ah ama qashin -qaadasho
Badanaa waxaa loo isticmaalaa isku darka
Meel duudduuban si fudud haddii aan la daaweyn esp maydhin
Aad ugu nugul nuugista qoyaanka, saliidaha jirka, iyo biyaha
Qalabka dheeraadka ah ee la isticmaalo xilliga qabowga
Waxqabadka biyuhu ee wanaagsan
Wuxuu isku daraa qaabab kala duwan oo wax lagu qurxiyo
Jilicsan oo leh muuqaal raaxo leh
Si dhaqso ah u xiro isticmaalka
Siigo aad u nuuga
Sofa maqaar iyo maqaar - isku -darka ugu habboon qaab kasta
In kasta oo ay soo jeediyeen talooyin badan, Waxaan u malaynayaa in qof wali dareemayo inuu ka labalabeynaayo inuu go'aansado midka ku fiican inuu u aado maqaar ama maro. Halkaan waxaan ku soo bandhigi doonnaa fikrad kale oo wanaagsan oo labadiinaba aad ku haysataan qolkaaga oo aan ku qaso maqaar qurux badan iyo fadhiga dharka oo si habboon ugu habboon gudahaaga.
Safafka haragga iyo dharka labadaba waxaa lagu dhex qaso gudaha rustic iyo Mediterranean, ku duugan tijaarada hodanka ah oo siman, midabyo dhexdhexaad ah oo dejiya iyo dareen diirimaad. Sofa maqaarku waa nooc ka mid ah alaabta guriga ee caadiga ah kaas oo had iyo jeer ku xidhan raaxo iyo canab. Dharka dharka, dhanka kale, gudbiyaa raaxo guud, diirimaad iyo dareen guri. Marka la isku daro gudaha rustic, saqafka safafka haragga iyo dharka ayaa soo bandhigi doona muuqaal soo jiidasho leh oo u muuqda inuu soo dhaweynayo martida soo booqata. Barkimooyin jilicsan oo ku jira codadka aamusan ayaa si fiican ugu daraya fadhiga. Qaababka ubaxa iyo quruxda leh ee fadhiga wuxuu sii daayaa soo jiidasho kale oo soo jiidasho leh qurxinta gudaha. Bal qiyaas in aad ag fadhido dabka oo aad ku raaxaysato dilidda qoryaha iyo qoob ka ciyaarka ololka. Miyaanay ahayn wax la yaab leh iyo nabad weyn oo gudaha ah?
Fadhiga maqaar iyo dhar, inkasta oo ay caado u ahayd naqshado dhaqameedyo badan, waxaan ka helnay mowqifkooda saxda ah gudaha gudaha casriga ah. Khadadka toosan iyo kuwa toosan, midabada isbarbar socda iyo kuwa isbarbar dhiga waxay muujinayaan naqshadda casriga ah ee gaarka ah, taas oo ah aragtida caadiga ah ee fadhiga casriga ah. Midabka midabku wuxuu diiradda saarayaa madowga caadiga ah, caddaan saafi ah, ciidamada badda, ama isku -dar ah baloogyadan midabka ah, iyo sidoo kale midab cawlan oo casri ah. Grey wuxuu u eg yahay si siman oo si fiican loogu daray madow ama caddaan. Isku -darka haragga iyo dharka ayaa bixiya raaxada iyo qaabka ugu dambeeya ee aan caadiga ahayn laakiin ma aha wax la yaab leh gabi ahaanba. Sofas -qeybeedyada quruxda badan ama kuraasta geeska ayaa ah meesha fadhiga ee martidaada iyo qoyskaaga, kuwaas oo si sahal ah ugu dhex milmi kara gudaha casriga ah iyo kuwa ugu yar. Barkimaha qurxinta ayaa sida caadiga ah ka muuqda hal midab oo aasaasi ah ama dhowr midab oo midabo ah oo aan lahayn qaabab qurxin. Sofa maqaar iyo dhar leh naqshad casri ah waxaa loola jeedaa inay noqoto udub dhexaadka qolka iyo gabal wada sheekeysi. Isku -dubaridka qaybsan wuxuu bixiyaa dabacsanaan si dib loogu habeeyo fadhiga sida baahidaada iyo doorbidistaadu tahay.
Sofahu waa meel lagama maarmaan u ah qolka oo dhan oo aad iska saarto walaaca, daal iyo niyad xumo. Waa meel maalin walba ka dhacda waxyaabo xiiso leh oo diirran. Waxaan rumeysanahay inay adag tahay in la doorto kursi ama maqaar fadhiga kumanaan nooc. Si kastaba ha noqotee, jawaabtu ma hubo midkee wanaagsan iyo adiga iyo qoyskaaga. Ilaa iyo inta ay ka soo baxayso shuruudahaaga iyo la qabsiga qurxinta guriga, taasi waxay noqon doontaa wax lagu farxo in la xusho.
Waqtiga boostada: 2020-11-27